Mugabe's woes wipe out almost R70 billion from Zimbabwe's stocks | IOL Business Report
Business Report / 21 November 2017, 1:19pm / Bloomberg
The Zimbabwean Dollar, left, made up of various denominations held with a twenty South African Rand note, right, in Harare, Zimbabwe, on Thursday, April 23, 2009. The South African rand is the "reference" currency being used in Zimbabwe, and is the most popular in circulation together with the U.S. dollar, the Economic Planning Minister Elton Mangoma told reporters in Pretoria. Photographer: KATE HOLT
HARARE - Investors dumped Zimbabwean stocks every day since the military seized power on optimism that 93-year-old President Robert Mugabe will be forced to step down.
The stocks, which are denominated in US dollars and were used to hedge against rising inflation, fell 10% on Monday to an eight-week low of 387.38, bringing the Zimbabwe Stock Exchange Industrial Index’s retreat since the army’s takeover on the morning of Nov. 15 to 27%.
Zimbabwe’s stocks soared this year after the government printed a new form of money -- called bond notes -- to deal with a cash shortage, stoking concerns over price growth in a nation that saw inflation jump into the billions of percent about a decade ago. While the southern African nation has mostly used the dollar since scrapping its own worthless currency in 2009, greenbacks have become scarce as Zimbabwe’s balance of payments position has worsened.